Aiva Muchikwata Chembavha, Aisasiya Pfuti | Bhaibheri Rinochinja
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Batak (Toba) Bengali Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chavacano ChiRomani (ChechiVlax, Russia) ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik Esan Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Galician Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Huastec (San Luis Potosi) Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kabuverdianu Kachin Kannada Kazakh Khakass Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mapudungun Marathi Maya Mongolian Mutauro Wemasaini wechiQuebec Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuAngola Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuBritain Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuIsrael Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuParaguay Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuSlovakia Mutauro Wemasaini wokuSweden Myanmar Nahuatl (Huasteca) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Nepali Ngabere Nias Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Pomeranian Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Huallaga Huánuco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Tena) Rarotongan Romanian Romany (Argentina) Russian Samoan Sango Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Talian Tamil Tandroy Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tongan Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Udmurt Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Valencian Venda Vietnamese Welsh Xhosa Yoruba Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Yakataurwa naAnnunziato Lugarà
GORE ROKUBEREKWA: 1958
NHOROONDO YOUPENYU: AIVA MUCHIKWATA CHAIITA ZVECHISIMBA
Ndakaberekerwa uye ndakarererwa mumarukisheni ekuRome, munzvimbo yaigara varombo vaienda kumabasa. Upenyu hwakanga hwakaoma. Handina kumbobvira ndakaziva amai vangu chaivo, uye ndakanga ndisinganyatsowirirani nababa vangu. Ndakadzidza kurarama mumamiriro ezvinhu akaoma.
Pandakazosvitsa makore 10, ndakanga ndatotanga zvekuba. Ndava nemakore 12, ndakatiza kumba kekutanga. Kakawanda baba vangu vaizonditora kumahofisi makuru emapurisa voenda neni kumba. Ndaigara ndichiitisana nharo nevanhu, ndaiita zvechisimba uye ndaingogumbukira munhu wese. Pandakanga ndava nemakore 14, ndakatiza kumba zvachose. Ndakatanga kushandisa madhiragi uye kugara mumigwagwa. Sezvo ndaisava nemba yekurara, ndaipaza motokari ndoraramo kusvika mangwanani-ngwanani. Ndaizotsvaka pandaikwanisa kuwana mvura kuti ndigeze.
Ndakava nyanzvi chaiyo pakuba, uye ndaiba zvose kubva pamabhegi kusvika pakuba mudzimba nemisha usiku. Ndakava nemukurumbira wakashata uye chimwe chikwata chembavha chakati ndibatane nacho, uye izvi zvakaita kuti nditowedzera kusvika pakuba mumabhengi. Pasina nguva ndakanga ndatova nhengo yaityiwa yechikwata chacho pamusana pehasha dzandaiva nadzo. Hapana kwandaienda ndisina pfuti yangu; kutaura zvazviri, ndaitorara ndakaiisa pasi pepiro. Upenyu hwangu hwakanga hwava hwekuita chisimba, kushandisa madhiragi, kuba, kutaura zvinyadzi, uye unzenza. Ndaigara ndichitsvagwa nemapurisa. Ndakasungwa kakawanda, uye ndakapedza makore akawanda ndichipinda nokubuda mujeri.
Pane imwe nguva pandakanga ndabudiswa mujeri ndakafunga kushanyira amainini vangu. Ndaisaziva kuti amainini vangu nevana vavo vaviri vakanga vava Zvapupu zvaJehovha. Vakandikoka kuti ndipinde musangano weZvapupu. Ndakasarudza kuenda navo nekuti ndaingoda kuona zvaivako. Patakasvika kuImba yoUmambo ndakasimbirira kuti ndaida kugara pedyo nedhoo kuitira kuti ndione vose vaipinda nekubuda. Ndaitova nepfuti yangu.
Musangano iwoyo wakachinja upenyu hwangu. Ndinoyeuka ndichifunga kuti ndinofanira kunge ndaiva pane imwe puraneti. Vanhu vacho vakandikwazisa neushamwari vachinyemwerera. Nanhasi ndichiri kuona Zvapupu zvacho mupfungwa dzangu, zviso zvavo zvairatidza mutsa uye kutendeseka. Izvi zvakanga zvakatosiyana zvachose nezvandakanga ndakajaira!
Ndakatanga kudzidza Bhaibheri neZvapupu. Pandairamba ndichidzidza, zvaiwedzerawo kujeka kuti ndaitofanira kunyatsochinja mararamiro angu. Ndakateerera zano riri pana Zvirevo 13:20 rokuti: “Munhu anofamba nevanhu vakachenjera achava akachenjera, asi iye anofambidzana nemapenzi zvichamuipira.” Ndakaona kuti ndaifanira kutambira kure nechikwata chiya. Zvaisava nyore, asi Jehovha akandibatsira ndikakunda.
Kekutanga muupenyu hwangu ndakanga ndava kukwanisa kudzora maitiro angu
Ndakazvichenesawo. Ndakashanda nesimba kuti ndirege kusvuta fodya nekushandisa madhiragi. Ndakagera bvudzi rangu rakanga rakareba, ndikabvisa mhete munzeve, ndokurega zvekutaura zvinyadzi. Kekutanga muupenyu hwangu ndakanga ndava kukwanisa kudzora maitiro angu.
Ndaisambofarira kuverenga nekudzidza, saka zvakanga zvakaoma kuti ndinyatsoisa pfungwa dzangu pakudzidza Bhaibheri. Asi sezvandairamba ndichiedza kudaro, zvishoma nezvishoma ndakatanga kuda Jehovha, uye hana yangu yakatanga kundipa mhosva. Kakawanda ndaizvishora, ndisina chokwadi kana Jehovha aizombondikanganwira zvakaipa zvose zvandakanga ndaita. Panguva dzakadaro ndainyaradzwa zvikuru nokuverenga nezvekukanganwirwa kwakaitwa Mambo Dhavhidhi naJehovha paakanga aita zvivi zvakakomba.—2 Samueri 11:1–12:13.
Zvakanga zvakandiomerawo kuenda pasuo nesuo ndichiudza vamwe zvandinotenda. (Mateu 28:19, 20) Ndaitya kuti pamwe ndaizosangana nemunhu wandakamboitira zvakaipa kare! Asi zvishoma nezvishoma ndakakunda kutya kwandaiita. Ndakatanga kunyatsofara nekubatsira vamwe kudzidza nezvaBaba vedu vekudenga vakanaka, vanokanganwira zvikuru.
Kudzidza nezvaJehovha kwakaponesa upenyu hwangu! Shamwari dzangu dzakawanda dzekare dzakafa kana kuti dziri mujeri, asi ndiri kurarama upenyu hunofadza zvechokwadi uye ndinotarisira ramangwana rakanaka. Ndakadzidza kuzvininipisa, kuteerera uye kudzora hasha dzangu. Izvi zvinoita kuti ndive neukama hwakanaka nevanhu vandinorarama navo. Ndinofara kuva nemudzimai wangu akanaka, Carmen. Tose tinofara kubatsira vamwe kudzidza nezveBhaibheri.
Iye zvino ndinoita basa rakatendeseka, dzimwe nguva rinosanganisira mabhengi, asi panzvimbo pekuba mumabhengi, ndinoachenesa!
Inzwa mhinduro dzemibvunzo ine chekuita neurongwa hwokudzidza Bhaibheri pasingabhadharwi.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Hapana Kwandaienda Ndisina Pfuti Yangu
Ndipeiwo Gore Rimwe Chete Rerugare Uye Mufaro